အဂတိဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသည့် မန္တလေးတိုင်း ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာနမှ ဌာနခွဲစာရေးမကို အမှုနှ? - Yangon Media Group
အဂတိဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသည့် မန္တလေးတိုင်း ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာနမှ ဌာနခွဲစာရေးမကို အမှုနှ?
အဂတိဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသည့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ဌာနခွဲစာရေးမ ကို မေ ၁၆ ရက်နံနက်ပိုင်းက အ ဂတိလိုက်စားကြောင်းပေါ်ပေါက် သဖြင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတ ရားလွှတ်တော်ရုံးက အမှုနှစ်ခုအ တွက်အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် လေး နှစ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ”ဒီနေ့ကဌာနခွဲစာရေးမကို အပြီးသတ်အမိန့်ချတာပါ။ အဂတိ လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၆နှင့် ၆၃အရပေါ်ပေါက်လို့ အမှုတစ်ခုချင်းစီအတွက် အလုပ် နဲ့ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်စီကိုသီးခြား ချခံစေဖို့အမိန့်ချတာပါ။ ဒီအမှုမှာ တရားလိုနဲ့လိုပြသက်သေ ၁၇ဦးကို စစ်ဆေးခဲ့တယ်။ တိမ်းရှောင်နေတဲ့ တိုင်းဦးစီးကိုလည်း ဖမ်းဆီးရမိဖို့ ဝရမ်းထုတ်ထားတယ်”ဟု တိုင်းဒေ သကြီးတရားလွှတ်တော်ရုံးမှတာ ဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောကြားသည်။
ယနေ့ရုံးထုတ်တွင် တိုင်းဒေ သကြီးတရားလွှတ်တော်ရုံးက ဌာန ခွဲစာရေးမဒေါ်သူဇာသည် ၂ဝ၁၃ခု နှစ် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက် ရေးဥပဒေပုဒ်မ-၅၆/၆၃အရ ပြစ် မှုပေါ်ပေါက်သဖြင့် ရာဇဝတ်ကြီး အမှုအမှတ်(၂/၂ဝ၁၈)အရ အလုပ် နှင့်ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်နှင့် ရာဇ သတ်ကြီးအမှုအမှတ် (၃/၂ဝ၁၈)အရ အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ် စုစုပေါင်း လေးနှစ်ကျခံစေရန် အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ယင်းအပြင်မန္တလေးတိုင်းဒေ သကြီး ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ တိုင်းဦးစီးမှူးဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်ကျော် သည် တိမ်းရှောင်နေသည့်အ တွက် တိုင်းတရားလွှတ်တော်ရုံးက ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားသည်။
”အမှုမှာက အကြောင်းပြ ချက်ကလည်း သိပ်မပါပါဘူး။ ဘာ ဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူကစာရေး ဖြစ်နေတာ။ ငွေထုတ်ပေးရတာဆို တော့ အဲ့ဒီလောက်ပဲ။ ပြစ်ဒဏ်ပိုင်းကလည်းသက်ညှာပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူကစာ ရေးဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာ ဖြစ်တာဆို တော့သက်ညှာပါတယ်။ မှားတယ် ဆိုရင်တော့ အယူခံတယ်ပေါ့။ အခုတော့ သူ့သဘောထားကဘာ မှမသိရသေးဘူး”ဟု တရားခံဘက် မှရှေ့နေအဖြစ် လိုက်ပါပေးသူတ ရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကျော် မြိုင်က ပြောကြားသည်။
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ဘဏ္ဍာနှစ် ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ ဘတ်ဂျက်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရန်ပုံငွေ ဘတ်ဂျက်တို့မှ ကျေးလက်လမ်း လုပ်ငန်းများ တင်ဒါခေါ်ယူရာတွင် လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအရ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို လုပ်ငန်းတန်ဖိုးငွေအဖြစ်ခွဲဝေ ထုတ်ပေးရာ၌ မန္တလေးတိုင်းဒေ သကြီး ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦး စီးဌာနမှ ငွေထုတ်သူအရာရှိတိုင်း ဦးစီးမှူး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မြင့်ကျော်နှင့် ဌာနခွဲစာ ရေးဒေါ်သူဇာတို့သည် လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာကိုအလွဲသုံးစားပြု၍ တင် ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီခြောက် ခုထံမှလုပ်ငန်းပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း အ လိုက် ထုတ်ပေးရမည့် ငွေများထဲမှ သုံးရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည့်ငွေကျပ် ၁ဝ ဒသမ ၂၇၈သန်းကျော်အား ”ရုံးစရိတ်/ငွေထုတ်စရိတ်”ဟုအ ကြောင်းပြကာ ဥပဒေနှင့်အညီရ ထိုက်သော အခွင့်အရေးကိုမမှန် မကန်ပိတ်ပင်၍ အကြိမ်ကြိမ်အပို ကြေးဖြတ်တောက်တောင်းခံရယူ ၍ အဂတိလိုက်စားခဲ့ကြောင်းစစ် ဆေးပေါ်ပေါက်သည့်အတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကျေး လက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ငွေထုတ် သူအရာရှိ တိုင်းဦးစီးမှူးဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မြင့် ကျော်အား ၂ဝ၁၃ခုနှစ်၊ အဂတိ လိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၆အရလည်းကောင်း၊ ဌာန ခွဲစာရေးဒေါ်သူဇာအား ၂ဝ၁၃ခု နှစ်၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက် ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၆နှင့် ၆၃အရ လည်းကောင်းအရေးယူ ဆောင် ရွက်ရန် မြစ်ငယ်နယ်မြေရဲစခန်း တွင် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်က အမှုဖွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နေပူချိန် မြင့်မားမှုကြောင့် ကြက်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းအချို့ မလုပ်ကြတော့သဖြင့် ကြက်အရှင်ဖမ်?
အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပခွင့် မပြုခြင်းမှာ NCA ကို ချိုးဖောက်ခြင်းဟု
ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆရာဝန်များပူးပေါင်း၍ မကွေးမြို့၌ နှုတ်ခမ်းကွဲ၊ အာခေါင်က